न्याय मरेकाे आभाष भयाे
काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले समकालीन नेपाली इतिहासमा अहिलेजस्तो न्यायालय र न्यायमूर्तिहरुको निन्दा, विरोध र भत्सर्ना कहिल्यै नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले न्याय मरेको आभाष भएको लेखेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत शनिबार साढे तीन बजे एक ट्विट जारी गर्दै यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। ...
न्याय सेवा आयोगको बैठक स्थगित
बुधबार बोलाइएको न्याय सेवा आयोगको बैठक स्थगित भएको छ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा न्याय सेवा आयोगका सदस्य माधवप्रसाद रेग्मी उपत्यका बाहिर रहेकोले बैठक स्थगित गरिएको न्याय परिषद् सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षाको नजिता प्रकाशन गर्न आयोगको बैठक अपराह्न ३ बजेका लागि बोलाएका थिए ।
काठमाडाैं : न्याय सेवा आयोगको बैठक स्थगित भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले बुधबार दिउँसो ३ बजेका लागि आयोगको बैठक बोलाएका थिए। न्याय परिषद् सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष एवं आयोगका सदस्य माधवप्रसाद रेग्मी काठमाडौं उपत्यका बाहिर रहेका कारण बैठक स्थगित गर्नुपरेको जनाएको छ। प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने न्याय सेवा आयोगमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र महान्यायाधीवक्ता सदस्य र
न्याय सेवा आयोगको बैठक आज : पुग्ला गणपूरक सङ्ख्या ?
न्याय परिषद्ले बुधबारका लागि न्याय सेवा आयोगको बैठक डाकेको छ । न्याय परिषद्का सचिवालयका अनुसार बुधबार दिउँसो ३ बजेका लागि न्याय सेवा आयोगको बैठक डाकिएको हो । गत साउन महिनामा लिइएको जिल्ला न्यायाधीशहरुको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ताको मिति तोक्ने र विविध विषय राखेर न्याय सेवा आयोगको बैठक डाकिएको न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले रातोपाटीलाई बताए ।आयोगले बैठक डाके पनि कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती
न्याय व्यवस्था सेटिङबाट भताभुंगः बादल
काठमाडौं, १० मंसिर । नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापा बादलले न्याय सेवा भताभुंग पारिएको टिप्पणी गरेका छन् । चितवनमा एमालेको १०औं महाविधेशन उदघाटनमा बोल्दै न्याय सेवा सेटिङबाट भताभुंग पारिएको टिप्पणी गरेका हुन् । ‘न्याय व्यवस्था सेटिङबाट भताभुंग पारिएको छ ,’ बादलले भने । उनले देशमा तिव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण भइरहेको बताए । नेपाल अमेरिका […]
न्याय नपाए विद्रोहको चेतावनी
बेपत्ता पारिएका पीडित परिवारका सदस्यहरुले न्याय नपाए विद्रोह हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको बेपत्ता पारिएको पीडितहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०७८ को सन्दर्भमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पीडित सदस्य सावित्री दूराले न्याय नपाए विद्रोह हुनसक्ने चेतावनी दिएकी हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरुले न्याय नपाए बिद्रोह गर्न सक्ने अधिकार दिएको भन्दै पीडित दुराले सरकारले समयमानै न्याय दिनुपर्ने बताइन् । अन्तरक्रियाम
सामाजिक न्याय: एक विवेचना
नेपालको संविधान सामाजिक न्याय प्राप्त गर्ने सिद्धान्तको दस्ताबेज हो । सामाजिक न्याय सरकारको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पद्धति र प्रविधिको केन्द्रीय लक्ष्य बनेको छ । राज्य र जनताको एकीकृत प्रयासबाट मात्र सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न सकिन्छ । विधि र कानुनको शासनभन्दा जनतालाई सबै प्रकारका न्याय प्रवाह गर्नु महत्वपूर्ण मानिन्छ । सामाजिक न्याय भनेको त्यो आधारभूत […] The post सामाजिक न्याय: एक विवेचना appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.
उनी गाइरहेकी थिइन् वेदनाको गह्रुंगो गीत त्यसैले सम्झेको छु त्यो आवाज, किनभने यो संसार जहाँ पैसाले न्याय किनिदिन्छ उनी एक गरिब आमा थिइन्।
न्याय परिषद सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी नियुक्त
१० असार, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्याय परिषद सदस्यमा रामेछापका रामप्रसाद भण्डारीलाई नियुक्त गरेकी छन् । उनले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीलाई न्याय परिषद सदस्यमा नियुक्त गरेकी हुन् । न्याय परिषद सदस्य लक्ष्मीबहादुर निरालाको वैशाख २१ गते निधन भएको थियो । उनकै ठाउँमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भण्डारीलाई सिफारिस गरेका थिए । न्याय परिषदले […]
'दबाब र जुलुसबाट न्याय पाइँदैन'
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले दबाब र जुलुसबाट नभइ प्रमाण र मिलिसका आधारमा न्याय प्राप्त हुने बताएका छन्। मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले दबाब र जुलुसले न्याय दिलाउन सहयोग नभइ न्याय प्रभावित पार्ने बताए।...